Ihe eji emepụta ego kacha mma na rụpụta | Guoshengli
Ejiri obere akpa Nkọwa
Ihe ndi ozo maka uzo
● reseppers nwere ike zippers: ezigbo akara na reusable
● Ọdịdị Pụrụ Iche pụrụ iche: a ga-egbutu obere akpa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịdị ọ bụla, ilekọta anya dị mma karịa obere akpa.
Anyị bụ ndị mba soplaya nke elu àgwà omenala biri ebi pouches dị ka: ebili pouches, kọfị pouches, ewepụghị ike pouches na maka nri na-abụghị nri ụlọ ọrụ. Ogologo, Ọrụ kacha mma na ezi uche dị na omenala ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị.
1. Ọfọn Kwadebere Printing Technology
Na igwe ọhụụ dị ọhụrụ, na-ejide n'aka na ngwaahịa anyị rụpụtara na ọkwa dị elu. Ma na-enye gị nhọrọ dị iche iche.
2. N’oge nzipu
Automatic na elu na-agba mmepụta akara na-emesi elu arụmọrụ arụmọrụ. Ijide n'aka na nnyefe oge
3. Ogo Nkwa
Site na akụrụngwa, mmepụta, iji mechaa ngwaahịa, a na-enyocha usoro ọ bụla site na ndị ọrụ njikwa a zụrụ nke ọma, na-ahụ na ị ga-ahụ ogo dị mma anyị na-ekwe nkwa.
4. Mgbe-Sale Services
Anyị ga-edozi ajụjụ gị na ọkwa mbụ anyị. Ka ọ dị ugbu a na-ewere ọrụ ọ bụla iji nyere aka dozie nsogbu ọ bụla.
Foto ndị ọzọ enwetara
Nke gara aga: Ewepụghị Bottom Pouches
Osote: Akwụkwọ ego